Waxan nasiib u leenahay inaan garaacno Bournemouth, sidaasi waxaa yiri Jose Mourinho | Weheliye Online
Waxan nasiib u leenahay inaan garaacno Bournemouth, sidaasi waxaa yiri Jose Mourinho
United ay ka soo kabsatay guuldaradii ugu dambeysay ee ay ka soo gaarto guuldaradii ay kala kulantay Premier League, waxaana ay sii adkeeyeen cadaadiska tababarahooda.
Anthony Martial ayaa dhaliyay goolkiisii ​​35-aad, oo ka mid ah afartii kulan ee uu u ciyaaray kooxda martida loo ahaa ayaa sababay dhiirogelin dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta, waxaana ay ku dhamaatay daqiiqadii 11aad ee Callum Wilson.
United ayaa weli ka jirta meel ka baxsan afarta kooxood ee ugu sareysa Premier League, lakiin mar kale waxay dareemayaan dhaqdhaqaaq iyo hamigooda xilli ciyaareedkan, 55 jirkaan ayaa u sheegay BT Sport: “Waxaan ahaa koox aad u nasiib badan.
“Waxa ay aheyd qeybtii hore ee ciyaarta, waa inay noqotaa, ciyaarta, 5-2, 6-2 oo sahlan, iyo qeybta labaad ilaa iyo inta aan goolal dhalineyno waxaan dareemay inaan nahay koox nasiib daro ah sababtoo ah waa inaan dhalin karnaa seddex, afar, shan gool.
“Waa wax aan ugu yeeri karno labo qeybood qeybtii hore, Bournemouth waxa ay aheyd kooxda ugu fiican, qeybtii labaadna waxaan ahaa kooxda ugu fiican.
“Waxay u egtahay inaanan si fiican u shaqeyneynin isbuucaan taas oo ah dareenka ugu xun aniga, aniga waxaan dareemayaa jahwareer.
“Waxaan heysanaa dabeecad cajiib ah iyo wadnaha oo ah natiijo kasta, ciyaarta ma dhamaaneyso, waxaana tageynaa ilaa dhamaadka.
“Waxaan isku deyayaa inaan helno isku dheelitir ah marka aan horumarinno kooxda wajiga labaad, saddexaad ee weerarka, marka aan xakameyno wax dhibaato ah nagama qabin, laakiin marka ay ka soo horjeedaan nalakaaga.”
Ander Herrera ayaa si aad ah loola xiriirinayay ka dib markii loo bedelay bedelkii qeybtii labaad, halka Rashford uu sidoo kale ku faraxsan yahay kursiga keydka, Mourinho ayaa hadalkiisa raaciyay: “[Waqtiga nuska ah] waxaan dhahayay inaysan macquul aheyn inaan ka ciyaari karno sidii aan sameynay, badhkeed waxay u fiicnaan doontaa hubaal.
“Waan ku faraxsanahay inaan keeno Ander Herrera ciyaarta, waxaan dareemay inaan u baahanahay inaan siino dheellitiro badan, islamarkaana kubada si dhaqso ah u soo kabsado, waan ku faraxsanahay isbedelkaas, aad ayay u fiicnaayeen.”
Previous articleWasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle oo xilka qaadis ku sameeyay duqii degmada Beledweyne Cali Cabduqaadir Sandheere
Next articleCiidamada AMISOM oo Afar ruux oo shacab ah ku dishay gudaha Mugadisho
Lates,Chelsea wa Semi Final-ka Champaha balse City No,Wararka Liverpool vs Real+News-ki Suqa kooxaha